Imtixaanada safarka | Faallooyinka Macaamiisha | Jawaabcelinta Dalxiiska
Waxaan ku faanaynaa inaan dib u eegno habboon ee aan ka helno macaamiisheena; had iyo jeer waxaan guud ahaan ku dadaalnaa inaan sii wanaajino maamulkeena si joogta ah. Dhegeysiga wixii macaamiishayadu u baahan yihiin in ay sheegaan waxay u maleynayaan inay tahay qayb aan lagama maarmaan u ah in aan aragno sida aan u hagaajin karno gaadiidkayaga, boorsooyinka dalxiiska, iyo adeegyada kale ee booqdayaasha mustaqbalka iman doona. Waxaan ku boorineynaa macaamiisheena in ay na siiyaan fikradoodooda, labadaba wanaag iyo diidmo, sidaas awgeed waxaan si wanaagsan ugu adeegi karnaa macaamiisheena wakhti dambe.
Sanduuqa gacmaha ee sanduuqyada waa mid ka mid ah safarrada ugu fiican ee ka shaqeeya Odisha. Aniga iyo qoyskaygu waxay tageen Bhubaneshwar, Puri sanadkii hore. Waayo-aragnimadii qoob-ka-qabatada ayaa ahaa mid cajiib ah, xubnaha shaqaalaha ayaa ahaa mid saaxiibtinimo iyo caawimaad leh.
Aqoonta dalxiisku wuxuu ahaa mid aad u fiican. Xirmada dalxiiska ayaa sidoo kale ahaa mid saaxiibtinimo leh. Waxaan soo helnay qoob-ka-doobiga xilligaas oo la baarayay bambaaniga Bandhiga Bhubaneshwar on internet-ka. Waxaan kugula talin doonaa inaad xermo xayawaannada safarka ah iyo safarka haddii aad qorsheyneyso inaad booqato Odisha.
Waxay ahayd waayo-aragnimo xusuus leh ee Sandbirdhiga Sandbalka Tours iyo Socdaalka. Qiimaha ayaa ahaa adeeg macquul ah oo xirfad leh. Guud ahaan, waayo-aragnimo wacan oo leh dhagaxyo ciid ah.
Muuqaalka muuqaalka maxaliga ah wuxuu sidoo kale hagay hagaha dalxiiska ee saaxiibtinimo leh gaadhi raaxo leh oo wanaagsan. Ugu dambeyntii waxaan dhihi karaa in laga bilaabo socdaalka u safrida wax kasta way fiicnaadeen oo si habboon loo habeeyey. U fiirsashada fasaxyo badan oo leh Sand iyo Qiyaano.
Soundaryaa, Mumbai, Hindiya
Mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee aad ka heli karto qoob-beegyada ciidda, waxay kugu dhejinayaan farxad iyo madadaalo. A waa in uu soo booqdo qof kasta oo la socda guys. amniga, madadaalada iyo qiimaha dhammaan saddexda arrimood ee ugu muhiimsan waxaa lagu daryeelaa qashinka cowska.
Haddii aad u safraysid keligaa ama qoyskaaga wax dhib ah maadaama ay haystaan ​​dhammaantood. Dhawaan seexashada xiga saacadaha dambe ee sanduuqa! Marka xigta ee aad aragto adigu waa inaad gashaa oo aad ka dhigtaa meesha aad ku socotid.